Daraasadaha Kiisaska - Mashiinnada Iswaafajiyay
Hadafkeenu waa inaan si dhow ulashaqeyno macaamiisheena anagoo naqshadeynayna oo soo saareyno qalabyada dawooyinka iyadoo aan loo eegin haday tahay heer ama dhib, iyo bixinta xalka ugufiican si loo buuxiyo dhamaan macaamiisheena baahiyahooda. Tani waa sababta aan u kasbannay kalsoonida joogtada ah ee macaamiisheenna adduunka oo idil.
Yemen Mashruuca Khadadka Wax Soo Saarka Qiyaasta Adag (loogu talagalay Kaabsolka iyo Waxyaabaha Looxa)
Year Sannadkii iskaashiga: 2007
Country Dalka macaamiisha: Yemen
Macaamiilkani waa shirkad qaybiyaha dawooyinka oo aan khibrad u lahayn dhinaca wax soo saarka dawooyinka. Waxay codsadeen in la sameeyo khad soo-saarka dawooyinka adag ee dawooyinka ah. Aan aqoon u lahayn hawlgalka qalabka iyo la'aanta hawlwadeenno xirfad leh ayaa ah laba cilladood oo waaweyn.
Waxaan kugula talinay xalka dhameystiran ee qadka wax soo saarka qiyaasta adag, iyo ka caawinta macaamiisha rakibida iyo howl galinta dhamaan wax soo saarka. Intaa ka sokow, injineeradeennu waxay ku tababarteen hawlwadeennada macmiilka aaggooda iyagoo ku kordhinaya foomka waqtiga tareenka asalka ah hal bil iyo bar illaa saddex bilood.
Warshadda dawooyinka ee macaamilka ayaa lagu caddeeyay si waafaqsan heerka GMP. Warshadu waxay shaqeyneysay in ka badan toban sano tan iyo maalintii la aasaasay xariiqda wax soo saarka. Waqtigan xaadirka ah, macmiilkani wuxuu balaariyay miisaankiisa isagoo abuuray laba warshadood oo dawooyinka soo saara. Sanadkii 2020, amar cusub ayey naga soo saareen.
Mashruuca Uzbekistan ee Kaabsolka iyo Soosaarida Kiniiniga
Mashruucani wuxuu kakooban yahay habka soosaarka laga soosaarayo waxsoosaarka ceyriinka, dhagxaanta, soosaarida kaabsoolka, miiska ilaa baakadaha ugu dambeeya.
Equipment Qalabka wax soo saarka
Tablet Cadaadis adag oo kiniiniga ah
Treatment Nidaamka daaweynta biyaha
Machine Mashiinka buuxinta kaabsolka Machine Mashiinka dahaadhka kiniinka
Machine Mashiinka wax lagu duubo ee finka leh
Machines Mashiinnada kartoonka
Muddada mashruuca: mashruuca oo dhan waxaa lagu dhammeeyay si guul ah 6 bilood gudahood
Mashruuca TURKEY ee Kaabsalka Iyo Soosaarida Kiniiniga
Year Sannadka iskaashiga: 2015
Country Dalka macaamiisha: Turkiga
Macaamiilkani wuxuu ubaahanaa dhismaha qadka wax soo saarka kiniinka oo dhameystiran warshad ku taalo aag fog oo gaadiidku uusan ku haboonayn, waxayna rabaan inay dhisaan nidaam hawo qaboojiye tamarta ku shaqeeya ah.
Waxaan u soo bandhignay xalal dhammaystiran geeddi-socod kasta oo wax lagu burburiyo, lagu shaandheeyo, lagu qaso, qolof qoyan, kiniin riixaya, buuxinta iyo kartoonno. Waxaan ka caawinay macaamiisha inay ku guuleystaan ​​naqshadeynta warshad, rakibaadda qalabka & ku shaqeynta, iyo sii kordhaya qaboojiyaha.
Waxaa ku lifaaqan nidaam hawo qaboojiye tamar-kar ah, qadkeena wax soo saarka kiniiniga ayaa ka faa'iideystey macaamiisha keydinta qiimaha wax soosaarka waxayna ka caawiyeen helitaanka shahaadada GMP.
Mashruuca Khadka Liquid ee JAMAICA ee Waxsoosaarka Eyedrop iyo IV Faleebo
Mashruuca isha-hoos u dhaca iyo soosaarka faleebada ayaa leh shuruud sare oo dhanka tayada ah, sidaa darteed xulashada alaabta ceeriin iyo qalabka baakadaha waa tallaabo muhiim u ah geeddi-soo-saarka.
Systems Nidaamyada mashruuca
Workshop Aqoon isweydaarsiga nadaafadda
System Nidaamka hawlgalka
Mashruuca Indooniisiya ee Waxsoosaarka Kaabsulka iyo Kiniiniga
Year Sannadka iskaashiga: 2010
Country Dalka macaamiisha: Indonesia
Macaamiilkani wuxuu leeyahay shuruudo adag oo loogu talagalay tayada khadka wax soo saarka qiyaasta adag oo wuxuu codsaday inuu helo qiimo tartan ah. Iyada oo ku saleysan cusbooneysiinta degdegga ah ee alaabtooda, awoodda alaab-qeybiyeha ayaa si aad ah loogu baahan yahay. Sannadkii 2015, waxay soo rogeen amar ah in afka lagu kala diro mashiinka sameynta filimka.
Waxaan siinay macmiilka 3 khadadka wax soo saarka qiyaasta adag, oo ay ku jiraan burburiye, qas, granulator qoyan, jiifka dareeraha sariirta, saxaafadda kiniinka, mashiinka dahaadhka kiniiniga, mashiinka buuxinta kaabsoosha, mashiinka baakadaha baakadaha iyo mashiinka kartoonka. Qalabkan dawooyinka ayaa macaamiilku si gaar ah u qadariyo.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan si guul leh u soo saarnay samaynta af-dhuuban af-duubista iyo mashiinnada baakadaha iyadoo aan si joogto ah u horumarinay si aan uga jawaabno shuruudda macaamilka ee ah in afka lagu kala diro mashiinka sameynta filimka.
Mashruuca Soosaarida Dareeraha Qiyaasta ALGERIA
Year Sannadka iskaashiga: 2016
Country Dalka macaamiisha: Algeria
Macaamiilkani wuxuu diiradda saarayay adeegga iibka kadib. Waxay bilaabeen inay nalashaqeeyaan iyagoo soo iibsaday mashiin kartoon ah. Maaddaama macaamilku uusan aqoon u lahayn mashiinka shaqeynaya, waxaan injineerkeenna u dirnay laba jeer warshadooda si ay ugu shaqaaleeyaan una tababaraan mashiinka illaa ay hawlwadeennadoodu awood u yeelanayaan inay si habboon u shaqeeyaan qalabka.
Alaabtayada tayada sare leh iyo adeegyadeenna heer sare waxay kasbadeen kalsoonida macaamiisha. Intaa ka dib, waxaan soo gaarsiinnay dhowr xal oo dhameystiran oo loogu talagalay khadka wax soo saarka sharoobada, qalabka daaweynta biyaha iyo khadka wax soo saarka qiyaasta adag.
Mashruuca diyaarinta adag ee Tansaaniya iyo iskaashiga qadka dareeraha ah
Year Sannadka iskaashiga: 2018
Country Dalka macaamiisha: Tansaaniya
Macaamiilkani wuxuu u baahnaa laba khad oo adag oo soosaarida qiyaasta daawada ah iyo hal sharoobo oo ah wax soo saar dareere ah oo afka ah (dhalada aan kala goyn, mashiinka dhalada, buuxinta iyo xirida mashiinka, mashiinka xira aluminium, mashiinka calaamadeynta, mashiinka galinta koobka, mashiinka kartoonka).
Intii lagu jiray muddadii isgaarsiinta ee hal sano ahayd, waxaan injineeradeenna u dirnay goobta macaamiisha laba jeer kormeerka aagga, sidoo kale macaamilku wuxuu sidoo kale u yimid warshadeenna saddex jeer. Sannadka 2019, waxaan ugu dambeyntii gaarnay ujeedka iskaashiga iyadoo qandaraas la siinayo dhammaan qalabka loogu talagalay dhismaha dhuumaha dhirta, daaweynta biyo kululeeyaha, 2 khadadka waxsoosaarka dawooyinka adag iyo 1 sharoobada afka soosaarka dareeraha oo leh xal dhammaystiran.